केपी ओलीका चौघेरा ! - नेपालबहस
केपी ओलीका चौघेरा !
| २०:३२:३३ मा प्रकाशित
६ मंसिर, काठमाडौं । एमालेको नवौं महाधिवेशनको रौनकका बेला चर्चामा थियो केपी ओलीको घेरा । पात्रहरु केही फरक वा लेयर फरक होला तर ओलीको घेरा उस्तै छ । भृकुटीमण्डपमा हुने महाधिवेशको लागि केपी ओली र माधव नेपाल अध्यक्षका उम्मेदवार थिए । दुवैको सचिवालय नयाँ वानेश्वरमा थियो । २०७१ साल असारको कुरा हो, यो । माधव नेपाललाई छोडेर केपी ओलीको कित्तामा आएका थिए राजन भट्टराई । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुदाँ पराराष्ट्र सल्लाहकार रहेका उनी अहिले केपी ओलीको पनि सल्लाहकार छन् ।
ओलीको सचिवालय अल्फाबिटामा थियो । माधव नेपालको अर्याल होटलमा । दुरी नजिकै भएको कारण दुवैतिरको रौनक देखिन्थ्यो । देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधि को कता तिर भनेर रेजा लगाईरहेका बेला राजन भट्टराइले अल्फाबिटामा प्याट बोली हाले । ‘पुरानो घेरा तोड्न सक्लान बुढाले ?’ सो कुरा सुनेर गलल हाँसे भानुभक्त ढकाल र भने, ‘बरु हामी सबै पाखा लागौंला तर त्यो घेरा त उस्तै हो ।’ यो संवाद त्यतिबेला निकै चर्चामा थियो । त्यो घेरा थियो चार भाइको । गुरु बराल, गोकुल बाँस्कोटा, खगराज अधिकारी र कर्ण थापा । यी चार भाइ त्यतिबेलाका चर्चित पात्र थिए ओली गुटका । उनीहरु गुटको पहिलो घेरामा थिए । त्यो पहिलो घेरामा पर्न सकिएला कि नाइ भन्ने शंका थियो भट्टराइको र माधव नेपाल छोडेर ओलीमा पहिल्यै गएका ढकाल पनि पुरै भित्रिया भएका थिएनन् र दुई भाइले हँ मा हँ मिलाएका थिए ।
ओली पद र शक्तिमा नहुँदा पनि उनको गुट निरन्तर चलाएका र तलतल ओलीको माहोल बनाएका कारण चारभाइ चर्चामा थिए । नव प्रवेशीहरुले यी चारले ओलीलाई कठोर र अराजक बनाएको भन्नसम्म भ्याएका थिए । तर जसरी पनि महाधिवेशन जित्नु पर्ने भएको कारण सबैले आ–आफनो शक्ति लगाए र ओली अध्यक्ष चुनिए । यी चार भाइको कति रिस थियो गुटमा भन्ने त्यसबेलाको मतपरिणामले पनि देखायो ।
विगत देखिनै गुटगत राजनीतिमा माहिर ओलीको अहिले चार लेयर (गुट) छ । पहिलो चार भाई समूह, दोस्रो ‘सफ्ट डिप्लोमेसी समूह’, तेस्रो मिक्समास समूह र चौथो सडकदेखि सदन समूह । एकतर्फी रुपमा सरकार चलाएको, सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएको र यसको भार सिंगो पार्टीले भोग्नुपर्ने अवस्था आएको भनी विगतदेखिनै आरोप लाग्दै आएको हो । त्यो बेला सो कुराको खण्डन गर्न र ओलीको बचाउ गर्न यी चार समूह क्रियाशिल रहदैं आएका थिए । प्रचण्डले हालै सचिवालयमा ल्याएको प्रतिवेदनपछि विग्रेको माहोलमा ओली पहिलो समूहको नजिकमा बढी पुगेका थिए । जसको परिणाम आरोपहरुको जवाफ नदिने र प्रस्ताव फिर्ता लिनु पर्ने अडान थियो । राष्ट्रपतिको हस्तक्षेपकारी भूमिका र ‘सफ्ट डिप्लोमेसी समूह’को लविङका कारण ओली सचिवालय बैठकमा गए । र अव जवाफ दिने वातावरण बन्यो । तर अब के गर्छन ओलीले भन्ने झन चौतर्फी चासोको विषय बनेको छ । यस्तो बेला उनी कुन समूहसँग बढी नजिक हुन्छन् नतिजा त्यस्तै आउँछ ।
प्रचण्ड मात्र होइन माओवादीविनाको एमाले बनाउनु पर्छ भन्ने लाइन पहिलो चारभाइ समूहको हो । प्रचण्डलाई सच्चाएर ठुलो शक्तिको रुपमा अगाडी जानुपर्छ भन्ने ‘सफ्ट डिप्लोमेसी समूह’को लविङ छ । किचलो पारी रहने, धमिलो वातावरण बनाई ओलीलाई सर्वेसर्वा बनाउने लाईन हो मिक्समास समूहको । ओलीले जे भन्छन, दायाँवायाँ हेर्दै नहेरी अगाडी जाने र ओलीको इच्छा अनुसार वातावरण बनाउने एवं त्यही अनुसारको सूचक समूह हो सडकदेखि सदनवाला समुहको र अन्तिम पर्दा साथ र सल्लाह त ओलीले पुरानो जिवन्त गुटको सारथी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग लिन्छन् नै ।
ओली पद र शक्तिमा नहुँदा पनि उनको गुट निरन्तर चलाएका र तलतल ओलीको माहोल बनाएका कारण चारभाइ चर्चामा थिए । नव प्रवेशीहरुले यी चारले ओलीलाई कठोर र अराजक बनाएको भन्नसम्म भ्याएका थिए । तर जसरी पनि महाधिवेशन जित्नु पर्ने भएको कारण सबैले आ–आफनो शक्ति लगाए र ओली अध्यक्ष चुनिए । यी चार भाइको कति रिस थियो गुटमा भन्ने त्यसबेलाको मतपरिणामले पनि देखायो । चार मध्ये कर्ण थापा एकमतले केन्द्रीय सदस्यमा चुनिए । बाँकी तीन पराजित भए । गुटभित्र पनि नरुचाइएको त्यही पहिलो घेरालाई लिएर ओली अगाडी बढे । र अहिले पनि पहिलो घेरामा यो गुट नै सक्रिय रहेको घटनाक्रमहरुले देखाएको छ । अहिले ओली चार घेरामा छन् । ती चार घेराहरु मध्ये उनले कुन घेरालाई बढी विस्वास गर्छन भन्नेमा उनीहरु स्वंय नै शंकामा छन् र एकले अर्कोले ओलीलाई सम्झाउन भन्छन् ।
मदन भण्डारी फाउण्डेशनको काममा पुर्वमा बढी सक्रिय रहेका गुरु वराल अहिले लो प्रोफाइलमा छन् । अहिले पनि गुरु बरालको स्थान ओलीबाट आफुमा सार्न हिक्मत कार्की र विनोद ढकालको आन्तरिक लडाई नै छ । तिनै बरालको पहल र योजनामा विवादका बीच जबजको प्रदेशस्तरीय भेला भयो र जसलाई ओलीले जुमबाटै सम्बोधन गरे । हेर्दा अरु पात्रहरु सक्रिय रहेको भएपनि यो कार्यक्रम गुरु बरालले ओलीलाई सुनाएपछि अगाडी बढेको हो ।
पहिलो घेराका अर्का चर्चित पात्र हुन गोकुल बाँस्कोटा । २०७० को संसदीय चुनाव काभ्रेमा हारेका, २०७१ को महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य पराजित भएका र एकपटक संसदीय चुनाव २०७४ मा जित्नासाथ सञ्चार राज्यमन्त्री बने त्यो पनि क्याबिनेटस्तरको । सञ्चार र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फुल मन्त्री थिएनन् ।
सञ्चारमा गोकुल बाँस्कोटा र स्वास्थ्यमा पद्मा अर्याललाई राज्यमन्त्री बनाइयो । लोकप्रिय मतले केन्द्रीय सदस्य जितेको, चुनावमा उपप्रधानमन्त्री तथा ठुलो नेता पराजित गरेको यसअघि एकपटक सांसद भइसकेकी पद्मा अर्याललाई राज्यमन्त्रीमा मात्र सिमित राखी बाँस्कोटालाई क्याबिनेट स्तरको मन्त्री मात्र बनाएनन् पछि बढुवा पनि गरे ।
पार्टी केन्द्रीय सदस्य पनि बनाए । प्रचण्डले मन्त्रालय फुटाउन नमानेको भए पद्मा अर्याल राज्यमन्त्रीबाट नै बर्हिगमन हुने अवस्था आएको थियो । ओलीको अति विश्वासिलो पात्र भएको कारण अरु मन्त्रालयमा हुने योजनाहरुमा समेत बाँस्कोटाको चासो हुन थाल्यो । ‘ओलीको छोरो’को उपमा पाएका बाँस्कोटा क्याविनेटमा प्रधानमन्त्रीसँग दोहोरो छलफल गर्नसक्ने एकमात्र पात्र थिए ।
उनमा आएको त्यो साहस देखेर अरु मन्त्रीहरु समेत दंग पर्दथे । ७० करोड कमिशनको अडियो काण्डपछि उनी मन्त्रीबाट बहिर्गमन भए ।उनले आफुले मात्र प्रचण्डको विरोध गरेनन् दस्ता नै तयार पारेका छन् बाँस्कोटाले । अहिले पनि बास्कोटा कति शक्तिशाली छन् भन्ने उदाहरण हो पार्वत गुरुङ्गको सञ्चार मन्त्रालयमा भएको स्थानान्तरण । ओलीले बाँस्कोटासँग सल्लाह गरेर नै पार्वतलाई सञ्चारमन्त्री बनाए र शपथ भन्दा पहिला नै बाँस्कोटाले पार्वत सञ्चार मन्त्री हुने बताइसकेका थिए । जबकी यसको सुईको विष्णु रिमालहरुले पनि पाएका थिएनन् ।
विष्णु रिमाल, सत्यनारायण मण्डल, छविलाल विश्वकर्मा, राजन भट्टराई, भानुभक्त ढकाल, कुष्ण गोपाल श्रेष्ठ, सुर्य थापा, शेरधन राई, हिक्मत कार्की, खिमलाल भट्टराई, देवराज भार, गोरख बोगटी, अग्नि खरेल र आनन्द पोखरेलहरु तेस्रो लेयरमा पर्छन । मिक्समास भएको, नतिजा मुखी र दरार सिर्जना गर्ने पात्रहरु समेत रहेको समूह हो यो । यो समूहमा कार्यगत एकता कम छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा भएका तीनजनाहरु बीचमा पनि त्यति राम्रो सम्बन्ध छैन ।
पहिलो लेयरका अर्का पात्र हुन खगराज अधिकारी । देशभरमा ओली गुट बलियो भएको तत्कालिन गण्डकी अञ्चल थियो । लगभग ९० प्रतिशत मत ओलीको होल्डमा रहेको गण्डकीका नेता हुन अधिकारी । पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्ग र गणेश तिम्सिना ओली गुटमा रहे पनि खगराजको कुन भूमिका हुन्छ त्यही अनुसार आफनो पोजिसन बनाउँथे । खगराजले ओली गुटलाई गण्डकी र धवलागिरीमा गाउँ कमिटी तहसम्म पु¥याएका थिए ।
२०७० को संसदीय चुनावमा पराजित भए पनि स्वास्थ्य मन्त्री हुने अवसर उनै ओलीले दिएका थिए । ओली गुटमा अराजक भएको कारण आफनै अञ्चलको सम्मानजनक मत पाउन नसकेको कारण केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएका थिए उनी । पछि ओलीले मनोनित गरे । र अब मन्त्री बनाउने लाइनमा छन् ।
सुदुरपश्चिममा एकछत्र ओली गुटलाई बलियो बनाउने पात्र हुन कर्णथापा । उद्योग मन्त्रीबाट हटाएर महेश बस्नेतलाई मन्त्री बनाउँदा पनि उनी गुट परिवर्तनमा लागेनन् । यसको कारण थियो ओलीले उनीमाथि गरेको भरोसा । अहिले पनि थापा ओलीलाई सफल बनाउन क्रियाशिल छन् र ओलीले थापालाई महत्व दिएको देखेर सचिवालयकै नेता अचम्ममा परेका छन् ।
यी चार भाइ पछि आउँछ, ओलीको दोस्रो लेयर । यसमा पर्छन सुवास नेम्बाङ, शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल, प्रदिप ज्ञवाली, ईश्वर पोखरेल र पुथ्वी सुब्वा गुरुङ्ग । यी छ भाइ मध्ये सबैभन्दा पछाडी छन् ईश्वर पोखरेल । पहिलो विष्णु पौडेल, दोस्रोमा शंकर पोखरेल र तेस्रोमा प्रदिप ज्ञवाली पर्छन । ओलीले पछिल्लो समयमा ज्ञवालीको कुरा कम सुन्न थालेका छन् । ईश्वर पोखरेल बाध्यताका सारथी हुन ।
ओली समस्यामा पर्दा सञ्चारमाध्यममा ओलीको बचाउ गर्नु बाहेक पृथ्वी सुब्वाको भूमिका गुटमा त्यति बलियो छैन । संकटमा सल्लाह लिने ओलीले यो लेयरबाट सुवास नेम्बाङ, शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल र प्रदिप ज्ञवालीसँग नै हो । यी चार भाईलाई ‘सफ्ट डिप्लोमेसी समूह’ पनि भनिन्छ । कम बोल्ने नतिजा निकाल्ने समूह हो यो ।
खिमलाल भट्टराईले राष्ट्रिय सभामा खेलेको भूमिका अनुसार प्रतिनिधि सभामा भएन भन्ने ओलीको गुनासोपछि खगराज अधिकारीले त्यो भूमिका नपाउँदै सदन अन्त्य भयो । अर्थात जहाँ अप्ठेरो पर्छ ओलीले विश्वास गर्ने पहिलो घेरासँग नै हो । तेस्रो लेयरका अरु नेताहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा ओलीको माहोल बनाउन क्रियाशिल छन् र ओली उनीहरुसँग निरन्तर सम्पर्कमा छन् ।
विष्णु रिमाल र सुर्य थापा एकातिर छन् भने राजन भट्टराई अर्कोतिर । माधव नेपाल छोडेपछि केपी ओलीको सुराकी थिए भानुभक्त ढकाल । पछि झलनाथ खनाल अध्यक्ष भएपछि बल्खुमा होटल खोलेर बसी दिनभरको रिर्पोट बालकोट लैजाने जिम्मेवारी थियो ढकालको । सो जिम्मेवारी कुशलतापुर्वक निर्वाह गरेपछि उनी २०७० मा समानुपातिक सांसद मात्र भएनन् प्रमुख सचेतक पनि भए । ओली सरकारको कानुन मन्त्री हुँदा मन्त्रीहरुको सुराकी राम्रोसँग गरेकै कारण उनलाई ओलीले पुरस्कारस्वरुप स्वास्थ्य मन्त्री बनाएका हुन । केही न केही नभएको भए यति विवाद हुँदा किन स्वास्थ्य मन्त्रीमा राखिराख्थे र ? मन्त्रीहरुको निवासमा भीडभाड देख्नासाथ त्यो खवर वालुवाटार कसरी पुग्यो भनेर मन्त्रीहरु समेत मुखामुख गर्ने अवस्था थियो । ढकालले अहिले पनि त्यो जिम्मेवारी पुरा गरिरहेको मन्त्रीहरुले बेला बेलामा बताउने गरेका छन् ।
कार्यालय सचिवको रुपमा रहेर गुटको खातिर काम र सुराकीकै कारण कृष्ण गोपाल शहरी विकास मन्त्री भए । नवौं महाधिवेशनमा केही दिन कहिले ओली कहिले नेपाल तिर लागेका थिए उनी । अन्तिममा ओली तिर उभिए । नवौं महाधिवेशनको डिजिटल काण्ड होस या हालका सरकारी काण्ड जता पनि रिमालको नाम अग्रपंतिमा आउँछ । तर पनि ओलीको घेरामा उनी कायम छन् । योगेश भट्टराईलाई अण्टसण्ट लेखेर चर्चामा रहेका बेला ओलीले रिमाललाई धाप हानेको काण्ड बालुवाटारमा चर्चित बनेको थियो । पछि शितल निवासको दवावका कारण उनै योगेश मन्त्री बने ।
मन्त्री भइसकेको व्यत्ति किन महान्याधिवक्ता भएको भनेर गुटमा समेत असन्तुष्टि थियो । कानुनी प्रक्रियाबाट गुटलाई बलियो बनाउन अग्नि खरेल जत्तिको अर्को पात्र छैन भनेर ओलीले नै अडान लिएपछि तै चुप मै चुप को अवस्था सिर्जना भयो । अदालतमा हुने सरकारवादी मुद्दामा समेत मन्त्रीको प्रधानमन्त्रीसँगको निकटता हेरेर मुद्दाको भ्याकेट भइरहेको छ र यसको नेतृत्व खरेलले गरिरहेका छन् । साथै न्यायालयको वारेमा ओलीले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्थाबाट पनि छुटकारा खरेलकै कारण मिलेको हो । खिमलाल भट्टराईले राष्ट्रिय सभामार्फत मन्त्रीहरुलाई नजानिदो तरिकाले लगाम लगाउने भूमिका खेलिरहेका छन् ।
साथै युवा पुस्तामार्फत ओलीको माहोल बनाउने भूमिका पनि कुशलतापुर्वक निवार्ह गरेका छन् । खिमलाल भट्टराईले राष्ट्रिय सभामा खेलेको भूमिका अनुसार प्रतिनिधि सभामा भएन भन्ने ओलीको गुनासोपछि खगराज अधिकारीले त्यो भूमिका नपाउँदै सदन अन्त्य भयो । अर्थात जहाँ अप्ठेरो पर्छ ओलीले विश्वास गर्ने पहिलो घेरासँग नै हो । तेस्रो लेयरका अरु नेताहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा ओलीको माहोल बनाउन क्रियाशिल छन् र ओली उनीहरुसँग निरन्तर सम्पर्कमा छन् ।
विशाल भट्टराई, महेश वस्नेत, पदम गिरी, तिलक महत, दिपक निरौला, सिता न्यौपाने, डा.विमला राई र युवासंघका केही एवं अखिलका केही नेताहरु ओलीको चौथो घेरामा पर्छन । यो चौथो घेरालाई सडकदेखि सदनसम्मको नाम दिइएको छ । अखिल र युवा संघकाले सडकको नेतृत्व गर्ने, सबै तिर माहोल सिर्जना गर्ने पदम गिरी र महेश बस्नेतले एवं सदनमा समेत भूमिका खेल्ने र त्यसलाई परिपक्क बनाउने काम विशाल भट्टराई र तिलक महतको जिम्मेवारीमा पर्छ । प्रभावकारी भूमिका खेलेको कारण विशाल भट्टराईलाई मन्त्री र पदम गिरीलाई राज्यमन्त्री आफनै कार्यकालमा ओलीले बनाउने छन् ।
यो चार लेयरमा नमिलेको एउटै कुरा हो को केपी ओलीको खास मान्छे हो भन्ने । त्यसैको परिणाम हो बेला बेलामा ओली सूचनामा चिप्लने । जस्तो सूचना पुग्यो त्यही आधारमा विचार बनाउने बानी ओलीमा रहेको कारण सूचकहरुले आफनो स्वार्थ समेत मिलाएर दिने गरेका छन् । त्यसलाई माधव नेपालले सचिवालय बैठकमा नै कुरा उठाएका थिए र भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री ज्यूले सूचनाको स्रोतलाई गहिरो गरी विश्लेषण गर्नु पर्ने देखियो ।’
चार लेयर मध्ये बढी कुरा सुन्ने पहिलो र दोस्रो कै हो ओलीले । यसपटक दोस्रो लेयरको भूमिका कम भयो र पहिलो र तेस्रो अगाडी आयो भने ओलीले द्धन्द्ध रोज्छन् । दोस्रोको भूमिका बढ्यो भने मिल्ने बाटो राखी प्रचण्डलाई आरोप लगाउँदैं प्रतिवेदन ल्याउने छन् । उनले ल्याउने प्रतिवेदन सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा जानेछ । साथै प्रचण्डको प्रतिवेदन पनि सँगै जानेछ । सडकदेखि बैठकसम्म माहोल बनाउन ओलीले तयारी समय मागेका हुन । जसको पहिलो लक्षण चितवनबाट देखिएको छ ।
जनताका नेता भन्नेलाई सुरक्षा थ्रेट ? १३ मिनेट पहिले
सचिवालय बैठकमा ओलिविरुद्ध पूरक प्रस्ताव पेश गर्दै प्रचण्ड ३१ मिनेट पहिले
नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दै, के होला प्रतिवेदन भीडन्त ? ५ घण्टा पहिले
अतिविपन्न तथा दलित घरपरिवारलाई खाद्यान्न सहयोग ३२ मिनेट पहिले
ऐन उल्लङ्घन गर्नेमा पानी उद्योग पहिलो नम्बरमा ३२ मिनेट पहिले
सडक र मोटरेबल पुल आयोजना अलपत्र, नागरिकलाई सास्ती ४२ मिनेट पहिले
मङ्गलाले हाडेभिरमा १५ श्ययाको अस्पताल बनाउन शिलान्यास ४५ मिनेट पहिले
थप ३ जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गयो ४५ मिनेट पहिले
मालपोत कार्यालय : कर्मचारीको अभाव, अर्कोतिर सेवाग्राहीको चाप ५३ मिनेट पहिले
पर्यटन प्रवद्र्धनमा पाँचपोखरीको अध्ययनको शुरु ५८ मिनेट पहिले
माझगाउँका ४९ वर्षीय इमानसिंह गुरुङ : तीन दशकदेखि साङ्लोले बाँधेर बन्धक २२ घण्टा पहिले
सूर्यविनायककाे जगातीमा ५० श्ययाको अस्पताल निर्माण शुरुआत २३ घण्टा पहिले
डा भट्टराई भन्छन, नेपाल र भारतबीचको संवाद पूर्वस्थितिमै फर्केको छ ! २० घण्टा पहिले
नेकपा विवाद: भोलिको सचिवालयमा के होला ? २४ घण्टा पहिले
आगामी पुस १ गतेदेखि पशुपतिनाथ मन्दिर खुला गरिने २० घण्टा पहिले
डीएसपीबाट पीडित व्यवसायी झा अझै पाएनन् न्याय १९ घण्टा पहिले
सरकारबाट विज्ञापन बोर्ड गठनः पाँच सदस्य नियुक्त २१ घण्टा पहिले
सडक छ, पुल छैन १९ घण्टा पहिले
महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ढकाल निर्वाचित २ दिन पहिले
आज साँझ हर्षवर्धन र प्रधानमन्त्रीबीच शिष्टाचार भेटवार्ता हुने ५ दिन पहिले
काेराेनाले भारतीय कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पटेलको निधन ६ दिन पहिले
बडिगाडमा मोटरसाइकल दुर्घटना, गम्भीर घाइतेको हेलिकोप्टरबाट उद्धार ३ दिन पहिले
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको पुस्तक ‘नयाँ राजनीतिक विश्लेषण’ बजारमा ४ दिन पहिले
विश्वभर कोरोनाबाट १४ लाख भन्दा बढीकाे मृत्यु, संक्रमितको संख्या ६ करोड नाघ्यो ६ दिन पहिले
परिवर्तन चाहियो, तर अब को ? २ हप्ता पहिले
आर्यनसँग पुड्की सुहानाको जोडी जम्ला ? १ हप्ता पहिले
झापामा कोरोना संक्रमणबाट ५८ जनाको मृत्यु, एक हजार ४ हप्ता पहिले
भर्चुअल रुपमा ब्रिक्सको सम्मेलन सम्पन्न २ हप्ता पहिले
ट्यांकरभित्रै प्वाल पारेर पेट्रोल चोरी २ हप्ता पहिले
बाँकेमा रगत समस्या समाधान, बिरामीको अकालमा ज्यान जाने अवस्थाको अन्त्य ६ महिना पहिले
साग प्रतियोगितामा प्रहरीबाट ९२ खेलाडीले खेल खेल्ने १२ महिना पहिले
क्वारेन्टाइनलाई आइसोलेसनमा परिणत गरिँदै ५ महिना पहिले
गाउँपालिकाबाट बाँदर धपाउन ९० थान बन्दुक वितरण ५ महिना पहिले